DF Soomaaliya oo war cusub kasoo saartay xiriirka KENYA | Radio Kaah
Maxamed Cabdirisaaq ayaa shaaca ka qaaday in hadda ay dib u soo laabtay wada shaqeynta labada dowladood, isla-markaana ay sii wadi doonaan xoojinta xiriirkooda.
Wasiirka ayaa sidoo kale tilmaamay inuu dhowaan la kulmay dhiggiisa Kenya ayna ka wada-hadleen sidii loo sii dhaqaajin lahaa xiriirka dibulmaasiyadeed ee kabada dal.
“Waxa aan soo celinay xiriirka diblumaasiyadeed mar uun ma aanay laheyn cilaaqaad muddo 6-bil ah, waxaa soo laabtay wada shaqeynta, waxa aan la kulmay dhiggeyga Kenya oo aan ka wada hadalnay sidii loo sii dhaqaan lahaa,” ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda.
Dhinaca kale waxa uu soo hadal-qaaday arrimaha ammaanka ee Soomaaliya, isagoo xusay inay ka go’an tahay in sare loo qaado awooda ciidanka, si looga adkaado argagixisada.
“Waa in aan sare u qaadnaa awoodda ciidanka Soomaaliya, si ay u qabsadaan dhul badan una joogaan waana waxa aan diiradda in badan saareyno,” ayuu hadalkiisa sii raaciyey.
Si kastaba Soomaaliya iyo Kenya oo mar xiriirkooda uu go’ay, kadib khilaaf soo kala dhex-galay ayaa dib u soo nooleeyey, waxaana si rasmi ah loo furay labada safaaradood.
Arrimahan ayaa kusoo aadaya, xilli haatan Soomaaliya ay galeyso doorasho guud oo isugu jirta tan baarlamaanka labada Aqal iyo mida madaxweynaha oo xamaasad gooniya leh.
Taggedbadweyn wararka maantaKENYAMagaalada BaydhaboMuuse BiixisomaliaSomalilandsomaliweyn wararka maantawararka maanta 2020wararka maanta 2021wararka maanta dhacdowararka maanta hiiraan onlinewararka maanta muqdishowararka maanta muqdisho 2021
Previous Article Maamulka Hiiraan iyo taliska ciidanka Xoogga oo eedeyn culus u jeediyey AMISOM
Next Article Dagaalka kursiga Aqalka Sare ee Cabdi Qeybdiid iyo Xaaf oo meel adag gaaray